गीत, संगीतबाट कहिल्यै फुर्सद हुँदैन
मौलिक भाकामार्फत् चिनिएकी गायिका मनु नेम्वाङ नेपालको पूर्वी जिल्ला पाँचथरको नवमीडाँडा–१ (फाल्गुनन्द गाउँपालिका)मा जन्मेकी हुन् । करिब २० वर्ष गीत, संगीतमै व्यतित गरिसकेकी नेम्वाङले लिम्बू, नेपाली भाषा र आधुनिक गरी १३ सय हाराहारीमा गीत गाइसकिन् । नृत्य र चलचित्र निर्देशनमा समेत पोख्त मानिने मनुको कलाकारितालाई नै मुख्य कर्म हो ।
लामो समयको अनुभवले उनी कलाकारितालाई मजाले बुझ्छिन् । एभरेष्ट टाइम्ससँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘कलाकारिता जीविका चलाउन अपनाइने पेसा होइन यो त आफ्नो समुदाय र देशको लागि दिइने योगदान पो हो ।’ गायनको अलावा रेकर्डिङ्ग तथा फिल्म प्रोडक्सन स्टुडियो सञ्चालन गर्दै आएकी कलासाधकी मनु नेम्वाङसँग बेलायत भ्रमण र सांगीतिक यात्राबारे गरिएको कुराकानी ।
कहिलेदेखि बेलायत भ्रमण निस्कँदै हुनुहुन्छ ?
म जानु पर्ने त अगस्ट १७ मा थियो । तर, कार्यव्यस्तताले गर्दा सेप्टेम्बर ६ मा युके जाँदैछु ।
कस्को निमन्त्रणामा ?
किरात याक्थङ चुम्लुङ, सेवारो कलाकार संघ, नेम्वाङ समाज, माङ्गेना चुम्लुङ युकेलगायत थुप्रै संघ–संस्थाको निमन्त्रणामा बेलायत भ्रमणमा जाँदैछु ।
कति समय बेलायतमा रहनुहुन्छ ?
सकेसम्म चाँडै नेपाल फर्किन्छु । हुन त, बेलायतमा पनि धेरै ठाउँमा मेरो कार्यव्रmमको डिमान्ड छ र भिसा पनि ६ महिनाकै छ । तर, नेपालमा पनि धेरै गीतहरू आफ्नै स्टुडियोमा बाँकी रहेकोले सकेसम्म छिट्टै फर्केर सकिदिनु पर्नेछ ।
बेलायतमा रहँदा के के गर्ने सोच छ ?
सकेसम्म लिम्बू पालाम, हाक्पारे, ख्याली, तुक्का, ताम्केलगायत मौलिक गीत, सङ्गीत केन्द्रित कार्यव्रmम गर्ने मेरो तयारी छ । साथै मौलिक नेपाली गीत, सङ्गीतको बारेमा बहस र छलफल समेत गरेर बेलायतमा रहेको नेपाली समुदायलाई यसप्रति आकर्षण र प्रवद्र्धन गराउन पहल गर्नेछु ।
बेलायत भ्रमणको तयारीबाहेक केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले गीत, सङ्गीतमै व्यस्त छु । मेरो नयाँ एल्बम ‘मन’ तयारी भएको छ । अर्कोे लिम्बू भाषाका ‘मिम्जीरे मिक्तोक पालाम सुङ’ पनि तयारी अवस्थामा छ । आफ्नो एल्बमबाहेक अरुहरूको पनि रेकर्डिङ तथा भिजुअलहरू गर्नुपर्ने हुँदा धेरै व्यस्त छु ।
समय मिलाउन गाह्रो छैन ?
व्यस्त त धेरै छु । तैपनि समय मिलाएर कामहरु गर्दैछु ।
तपाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
म गीत, सङ्गीत क्षेत्रमा लागेको २०५४ सालदेखि हो । त्यो भन्दा अगाडि गाउँघर तथा विद्यलयको नाटक, नृत्य कार्यव्रmमहरू तथा प्रतियोगिताहरूमा सक्रिय थिएँ । मिकिफुङ्वा माराम नाटकमार्फत २०५२ सालमा मेरा श्रद्धेय गुरु राजकुमार आङदेम्बेज्यूसँग भेट भयो । र, उहाँले तिम्रो त स्वर पनि राम्रो रहेछ, गीत गाउ भन्नु भन्नुभयो । उहाँकै सल्लाहअनुसार आदरणीय दाजु प्रेम पन्धाकज्यूको रचना तथा शब्दमा तुत्तुगेन यम्बा तुम्याहाङ्से, नाभोन्जी हयङ आन्देङ्बसे (आदरणीय श्रद्धेयज्यूहरू, मेरा सहकर्मी साथीहरू) नामक गीत आनि साक्थिम चलचित्रमा गाउने अवसर पाएँ । सोही गीतले मलाई मनु नेम्वाङ भनेर चिनाइरहेको छ । यस गीतको रेकर्डिङपछि म गीत, सङ्गीत क्षेत्रमा निरन्तर लागिपरेको छु ।
तपाईको एल्बम गीत कुन–कुनले सफलता पायो ?
मेरो लिम्बू भाषाका एल्बमहरू सेमेक्वा, पालामसुङ् र पाःमा, नेपाली लैजाउ रेलैमा र सयौं चोटहरूले राम्रै सफलता पाए । अहिले तयारीमा रहेका ‘मन’ र ‘मिम्जिरेन् मिक्तोक’ पनि अत्यधिक डिमान्ड आइरहेकाले राम्रै हुन्छ भन्ने लागेको छ । तयारीमा रहेका एल्बमहरूमा मेरै शब्द, सङ्गीत र स्वर छ ।
तपाईले गाउनु भएका चर्चित गीतहरू ?
प्रायःजसो सबै गीतहरू दर्शक, श्रोताले मन पराइदिनुभयो । त्यसमध्येमा नि ! धेरै नै चर्चित भएका गीतहरू लिम्बूमा तुत्तुगेन यम्बा, माघालाजे, सेङघायो, लोकगीतमा घाँसे पखेरीमा, कहाँको सोल्टेनी, खोरोङ्मा खोला, ठूली आइ लभ यू र आधुनिकमा सयांै चोट र जताततै छन् ।
हालसम्म तपाईले कति गीत गाउनुभयो, हिसाब छ ?
लिम्बू, लोक र आधुनिक सबै गर्दा १३ सय जति छन् ।
भाषा–भाषीको गीत गाउने त्यति चर्चामा आउँदैनन् भनिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
सत्य र इमानदार कलाकारको भूमिका नै त्यो हो कि जुन अरुले गर्न सक्दैदनन्, त्यही गरेर देखाउने । नेपाली गीत, सङ्गीतमा थुप्रै कलाकारहरू थिए र त्यहाँ मेरो आवश्यकता थिएन । तर, लिम्बू समुदायको हाक्पारे पालाम गाउने कलाकार थिएनन् जसले गर्दा म लागेँ । मौलिक गीत गाउनाले आज गायिका मनु नेम्वाङ भएँ । मेरो बुझाइमा कलाकारिता जीविका चलाउनको लागि अपनाइने पेसा होइन यो त आफ्नो समुदाय र देशको लागि दिइने योगदान पो हो ।
यही पेसा रोज्नुको खास कारणचाहिँ ?
सुरुमा त रहरले लागियो, पछि पेसा भयो । अहिले त बाध्यता नै छ ।
गीत, सङ्गीतमा लाग्न कतिको सजिलो छ ?
गीत, सङ्गीतको औपचारिक शिक्षा लिइ वा राम्रो प्रशिक्षण लिइ व्यावसायिक किसिमले लाग्नेहरूको लागि त अति नै राम्रो छ । यसमा धैर्य र लगनशीलता चाहिन्छ । तर, यस क्षेत्रको साधनाबिना अरुको उक्साहट र लहैलहैमा पैसा खर्च गरेको भरमा कलाकार बन्नेहरूको लागिचाहिँ अभिसाप नै हो यो क्षेत्र । किनकि यो क्षेत्र रहर वा पैसावालाको फाइफुर्तीको भरमा क्षणिक चल्नुभन्दा कलाकार हुनु आपूmमा कला, ज्ञान हुनु प¥यो । त्यसको प्रयोग गर्न जान्नुप¥यो । अथवा कलाकारिताको अर्थ बुझ्नु प¥यो । यहाँ त कत्ति साधना, अध्ययन र खर्च गरेर गीत बनायो अनि हाम्रो ट्रयाक मागेर उल्टै टप कलाकार पल्टेर हिँडिरहेको हुन्छ । यस्ता विकृतिको कारण अहिले निकै अस्तव्यस्त छ यो क्षेत्र । तर, यस्ता गलत प्रवृत्ति छिट्टै निर्मूल हुन्छ भन्ने आसमा छु ।
अर्कोतर्फ अहिले पहिलाजस्तो सीडी, एल्बमहरू बिक्दैनन् । २÷३ लाख खर्च गरेर गीत रेकर्डिङ र भिजुअल गरेर यू–ट्यूबमा हाल्यो १ लाख भिओर्सको ३÷४ हजार दिन्छ । अनि कसरी बाँच्नु हामी कलाकार भएर ।
गीत, सङ्गीतका लागि थप केही योजना बनाउनुभएको छ कि ?
मेरो रेकर्डिङ्ग तथा फिल्म प्रोडक्सन स्टुडियो पनि छ । मेरो सारा लगानी र काम भनेकै लिम्बू र नेपाली गीत, सङ्गीत क्षेत्रमा नै हो । गीत गाएर मात्रै नभइ यसको मर्म र भाव नयाँपुस्तालाई मनन् गराउन ‘केलाङ’ नामक फिचर फिल्म मेरै निर्देशनमा बनिसकेको छ । यसमा चलचित्र निर्देशक चन्द्र वाम्बुलेको विशेष सहयोग छ ।
संगीत क्षेत्रको भविष्य कस्तो छ ?
सिकेर, बुझेर लाग्नेहरूको लागि त स्वर्ग नै हो । त्यत्तिकै हाम्फाल्नेहरुका लागि जुवा खेलेजस्तो ।
गीत, सङ्गीतबाहेक अरु केही गर्नु हुन्छ ?
मलाई यही क्षेत्रबाट कहिल्यै फुर्सद हुँदैन ।
यतिबेला नेपाली गीत, सङ्गीत र कलाकारिता क्षेत्रमै ठूलो विकृति छ । जस्ले गर्दा राम्रा, इमानदार र सच्चा कलाकार धेरै ओझेलमा परेका छन् । म आमदर्शक, श्रोतालाई के अनुरोध गर्छु भने, अब हाम्रो होइन राम्रोलाई साथ दिने बानी बसालौँ । सच्चा कलाकारलाई सहयोग र अघि बढ्न सघाउनु भनेको हामी आफ्नो कलाको मान र सम्मान गर्नु हो ।